Ụbọchị My Pet » N'ihi na Ịhụnanya nke a Pet
M a nnọọ gbakọrọ onye. Ihe niile m na-eme na-juputara zubere, n'ihi na ihe niile m na-eme bụ nnọọ ụzọ. Mgbe ị na-ekpebi na m chọrọ a Pita, M nlezianya na-eche banyere oge nkwa, ego na-akwụ ụgwọ na ndị ogologo-okwu mmekọrịta na anyị ga-enwe ọnụ. Ihe m mere gbakọọ bụ na otú nke m cat, Beau ga-azọpụta m.
M iri-na-afọ ise, M na-mesoo a ike ndụ. Na n'etiti ya niile, ụbọchị m iyi chawapụrụ na ndị ọzọ kendilite maara na m cat na-echere m n'ụlọ. My owu ọmụma bụ gh dị ka beau enye a furry enyi bụ onye na-adị njikere inye nkasi obi na-enweghị ikpe. The ụbọchị hour-ogologo oge anu ulo mgbe cuddling na ikpochapụ pụọ anya mmiri na-enye ndị ọzọ ihe enyemaka na-atụrụ ndụ karịa otú m chere ga-ekwe omume. The ụbọchị hour-ogologo oge play sessions jupụtara ọchị na-enye ndị ọzọ ọṅụ karịa otú m chere ga-ekwe omume. Ịhụnanya nke a Pita nwere ike n'ezie na-agwọ.
Otu n'ime ihe ndị mere m chọrọ a Pita bụ inyere m na-adịwanye nne na nna. Na m maara na ịhụnanya nke m Pita ga-enyere gbanwee m n'ime nne na m chọrọ ịbụ n'ihi na m ga-eme n'ọdịnihu ụmụ. Beau si na nduzi gosiri m ibu ọrụ na àjà chọrọ n'ezie ịkpọlite ​​na-enyere inwewe ọzọ ndu. Na nloghachi, ya-adabere n'ihe ụfọdụ n'anya emewo ka m n'anya miri. Ọ gosiri m a ịhụnanya na dịghị mgbe m maara bụ na o kwere omume. Ịhụnanya nke a Pita pụrụ n'ezie-akụziri unu ihe ịhụnanya pụtara.
My gbakọọ mgbalị ịchọta m Pita mere ka m na-ewe awa atọ n'obere ụgbọala gafee ala nke Michigan. Mgbe abanye nnapụta, otu n'ime ndị kittens wee ikike karịrị m, tọrọ ala na m n'apata, na agaghị ahapụ. M na-ekwu. Site n'ụbọchị ahụ gaa n'ihu, m pusi na m nwere a pụrụ iche nkekọ. Beau bụ nnọọ enyi na enyi, fọrọ nke nta nkịta-dị ka ma ọ bụ nnọọ na-agwa banyere onye. Ịnagide Ọtụtụ ndị enyi m na ịchọ ịlụ gị ịbịa ihe karịrị afọ, Beau pụtara ya ike ugboro ugboro na-kpe ikpe ziri ezi a onye. M, n'ezie, ugbu a ịgakwuru ya maka doo anya. Ịhụnanya nke a Pita pụrụ n'ezie na-egosi na agwa na intension nke ndị ọzọ.
-Abịa site a gbajiri n'ụlọ na-enwe obere ọ mmekọrịta papa m emewo m ka m ghọọ mechiri emechi-apụ. N'ihi nke a, mgbe ị na-ahọrọ m Pita, Na m maara na ọ na-ama na-nwoke. The n'anya ọdịdị na ịhụnanya M gosiri beau ka n'aka duru ya na-a nnọọ ịhụnanya cat. Ya na-adabere n'ebe m gosiri m otú ngwangwa ọ dị n'ezie na mmekọrịta a. Ịhụnanya ahụ beau gosiri m na-enye m olileanya, n'ihi na ọ n'ike mmụọ nsọ m ka m na-emeghe ma na-adịghị ike. My cat gosiri m na-ahụ n'anya na onye ọzọ bụ mgbe uru ihe ize ndụ. Ịhụnanya nke a Pita pụrụ n'ezie nwee olileanya.